Tonga ny PAPPL 1.2 miaraka amin'ny fanohanana MacOS, API vaovao, fanatsarana ary maro hafa | ubunlog
Michael R Sweet, mpanoratra ny rafitra fanontana CUPS, nanambara ny famoahana ny PAPPL 1.2, rafitra fampivoarana fampiharana fanontam-pirinty mifototra amin'ny IPP Everywhere izay aroso hampiasaina fa tsy ny mpamily mpanonta mahazatra.
Ho an'ireo izay tsy mahafantatra ny PAPPL dia tokony ho fantatr'izy ireo izany Ny framework dia natao voalohany hanohanana ny rafitra fanontam-pirinty LPrint sy ny mpamily Gutenprint, fa azo ampiasaina hampiharana fanohanana ho an'ny mpanonta sy mpamily rehetra rehefa manao pirinty amin'ny desktop, server, ary rafitra tafiditra. Antenaina fa ny PAPPL dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny fandrosoan'ny teknolojia IPP Everywhere fa tsy ny mpamily mahazatra ary manamora ny fampifanarahana amin'ny programa hafa mifototra amin'ny IPP toy ny AirPrint sy Mopria.
PAPPL dia misy fampiharana naorina ao amin'ny protocol IPP Everywhere, izay manome fitaovana hidirana amin'ny mpanonta eo an-toerana amin'ny alalan'ny tambajotra iray ary manatanteraka ny fangatahana fanontana.
IPP na aiza na aiza miasa amin'ny mode "controllerless". ary, tsy toy ny mpamily PPD, tsy mitaky ny famoronana rakitra static configuration. Ny fifandraisana amin'ny mpanonta dia tohanana mivantana amin'ny alàlan'ny fifandraisana mpanonta eo an-toerana amin'ny alàlan'ny USB sy amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tambajotra mampiasa ny protocols AppSocket sy JetDirect.
PAPPL azo amboarina ho an'ny rafitra miasa mifanaraka amin'ny POSIX, anisan'izany ny Linux, macOS, QNX, ary VxWorks.
Ny fiankinana dia misy ny Avahi (ho an'ny fanohanana mDNS/DNS-SD), CUPS, GNU TLS, JPEGLIB, LIBPNG, LIBPAM (ho an'ny fanamarinana), ary ZLIB. Mifototra amin'ny PAPPL, ny tetikasa OpenPrinting dia mamolavola fampiharana mpanonta PostScript manerantany izay afaka miara-miasa amin'ireo mpanonta maoderina mifanaraka amin'ny IPP (ampiasain'ny PAPPL) izay manohana ny PostScript sy Ghostscript, ary miaraka amin'ireo mpanonta tranainy manana mpamily PPD.
1 Ny endri-javatra vaovao lehibe indrindra amin'ny PAPPL 1.2
1.1 Ahoana ny fametrahana PAPPL amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ny endri-javatra vaovao lehibe indrindra amin'ny PAPPL 1.2
Ao anatin'ity dikan-teny vaovao amin'ny rafitra atolotra ity, dia asongadina fa nampiana ny fanohanan'ny localization feno, miaraka amin'ity version 1.2 ity ny localization dia manolotra ny teny anglisy, frantsay, alemà, italianina, japoney ary espaniola.
Ny iray hafa amin'ireo fiovana misongadina amin'ity PAPPL 1.2 vaovao ity dia ny fanohanana nohatsaraina ho an'ny macOS, miampy fampidirana miaraka amin'ny menio macOS eran-tany ambony dia omena ary nampiana ny fahafahana mampandeha rindranasa fanontana amin'ny fomba mpizara.
Ho fanampin'izany dia asongadina ihany koa fa nisy endri-javatra fanampiny amin'ny protocol IPP (Internet Printing Protocol) ary nampiana API vaovao mba hamaritana ny haavon'ny ranomainty sy ny toner, hikarakarana ny fampahafantarana, hamerana ny isan'ny mpanjifa ary izany. dia nampiana fanohanana ny toetra IPP "mpanao pirinty-dia-manaiky-asa" ao amin'ny asa papplPrinterDisable sy papplPrinterEnable.
Marihina ihany koa ny fanampin'ny fanohanana interpolation rehefa manonta sary JPEG na mampiasa ny fiasa papplJobFilterImage miaraka amin'ny anti-aliasing.
Amin'ny lafiny iray, asongadina fa nampiana ny fahafahana mametraka ny haben'ny takelaka manokana amin'ny milimetatra, ary koa ny fampifanarahana amin'ny tranomboky OpenSSL sy LibreSSL.
Nohavaozina ny kaody fitaovana USB ampiasaina amin'ny famoronana fitaovana mpanjifa USB ary mamolavola ny fitaovana USB amin'ny rindrambaiko.
Rohy nomena ny mpampiasa ny lahatahiry miaraka amin'ny spool fanontam-pirinty default.
Nihatsara ny fifanarahana amin'ny tranomboky libcups3.
Ahoana ny fametrahana PAPPL amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fametrahana ity fitaovana ity amin'ny rafitra misy azy dia afaka manao izany izy ireo amin'ny fanarahana ny toromarika zarainay eto ambany.
Ny zavatra voalohany tokony hataon'izy ireo dia ny manokatra terminal ary ao anatin'izany no hanoratany izao manaraka izao mba hametrahana ny fiankinan-doha rehetra ilaina:
Ankehitriny dia handeha hisintona ny PAPPL stable farany indrindra izahay miaraka amin'ny:
Sokafy ary tohizo ny fanangonana ny kaody loharano miaraka amin'ny:
Ary miroso amin'ny fametrahana amin'ny:
Rehefa vita izany dia afaka mijery ny antontan-taratasy izy ireo mba hahafantaranao ny fampiasana ny PAPPL ato amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Tonga miaraka amin'ny fanohanana ny MacOS, API vaovao, fanatsarana ary maro hafa ny PAPPL 1.2